Vertical uye chinjikira
Corrugated Kadhibhodhi Kugadzira Line
Muchina wekudhinda weFlexo
KUNYANYA KUKUNDIKANA UYE KUSANGANA KWENYAYA YEMAHARA BHODHI YEMAHARA KUKOSHA （2）
Tatu, warpage 1. Warpage yakakamurwa kuita: yakatwasuka yakadzika kumisidzana, yakatwasuka kumusoro ichikwenya, kureba kwekumusoro ichikwenya, kureba kwekudzika kwakamisidzana, S-yakaita kurwa, mbiri-nzira kurwisa 2. Njodzi dzinokonzerwa nekukamba: cheka, bepa harigoni otomatiki ...
KUNYANYA KUKUNDIKANA UYE KUSANGANA KWENYAYA YEMAHARA BHODHI YEMAHARA KUKOSHA
1. Kusabatirira kwakashata (gundi yakavhurika, glue yekunyepera) Kuita kwacho kuri: mushure mekunamatira kwekutanga kwekadhibhodhi kwemaminitsi mashanu, pasi pekuita kwesimba rekunze, mukati, pamusoro kana mataira A, B kana sangweji zvakaparadzaniswa zvachose , uye tese tambo dzemapepa dzakabatana, kwete kuvharwa, uye ...
Zvakajairika kukundikana uye zvipikiso zvemakorari bhodhi yekugadzira mutsara
Indasitiri-inoenderana neruzivo rwemakatoni ekupakata michina
Mapepa anonyanya kugadzirwa nematanda, mushenjere pulp, nehuswa hune zvinhu zvakasiyana-siyana zvefibre. Ukobvu hwepepa rakaburitswa nechigayo chemapepa, kana chakavakirwa mupepa uye makadhibhokisi. Asi mutsetse hauna kuomarara. Kazhinji kutaura, hwaro hwehuremu hwakaderera pane 200 g / m kana isingasviki 0.1 mm gobvu. Col ...
chemarata bhokisi kugadzira muchina / Imwe facer muchina
Mushini mumwechete-mativi une roll roll uye imwe-mativi yakakomberedzwa yekugadzira muchina. Kutanga, iyo yakakomberedzwa bepa pepa rinopisa, uyezve iyo corrugated roll inoshandiswa kugadzira chinodiwa chemarara chimiro. Chekupedzisira, iyo glue (starch adhesive) inoiswa kune yakasarudzika yepamusoro uye combi ...
Kwemakore mazhinji, nekuda kwemhando yepamusoro yezvigadzirwa zvekambani yangu, Vazhinji vatengi vakasarudza zvigadzirwa zvedu, Pakati pavo pane vatengi vanobva kuTurkmenistan, Vakatenga mazana matatu nemazana matatu emhando yemakadhibhokisi ekugadzira makarata, Yanga ichishandiswa kwemakore matatu, Mutengi Feedba. ..
Iva nesimba rakasimba mushure mekutengesa timu, -nguva-refu zvishandiso kugadzirisa uye kugadzirisa pasirese
[Pfupiso Tsananguro] Hebei Xinguang Carton Machinery Kugadzira Co, Ltd. iri kumaodzanyemba kweguta guru Beijing nekuchamhembe kweJinan. Iyo ine nyore kwazvo mvura uye kutakurwa kwenyika. Iyo inyanzvi bhizinesi ine yakati wandei chiyero chekugadzirwa kwemakatoni michina uye pr ...
Tekinoroji | Inventory yeiyo crux yekatoni kurasikirwa uye matanho ekuvandudza.
Kurasikirwa kwemabhizinesi emakatoni chinhu chakanyanya kukanganisa mutengo. Kana kurasikirwa kwacho kuchidzorwa, kunogona kuwedzera kushanda kwebhizimusi kusvika padanho rakakura uye kugadzirisa kukwikwidza kwezvigadzirwa. Ngationgororei kurasikirwa kwakasiyana siyana mufekitoni yekatoni. Kuti uzviise zvakapusa, iyo t ...
Tarisa chikonzero nei kukwirira kwemakadhibhodi kuchichinja.
Kana zvasvika pakushaikwa kwemakadhibhokisi emarata, vanhu vazhinji vanofunga nezvemakadhibhokisi emarata. Muchokwadi, ichi chiitiko hachina kufanana neinverted. Inokurudzirwa kuti uongorore kubva kune akati wandei zvinhu senge zvigadzirwa, mbichana tile michina, flyovers, pasting michina, conveyor mabhandi, p ...
Hebei Xinguang Carton Machinery Kugadzira Co., Ltd.
3km kumaodzanyemba kweguta dongguang County kumabvazuva kwe104 yenyika mugwagwa mukuru